Soosaarayaasha Birta ugu Fiican & Soosaarayaasha Noocyada Birta ah | Alice
Soo-saareyaasha bixiya magaceeda sumadda tayada sare leh ee adeegyada oEM
Calaamadda dhalada birta
Aluminium sumadda calaamadaha
Magaca Magaca 'Zinc Alloy'
Sumarka Birta ahama
Baadhitaanka Goobta Macaamiisha ee Whilesale SC oo leh qiime wanaagsan - Alice
Waxaan nasiib u yeelanaynaa in aan laheyn iskaashi labada dhinac ah illaa iyo sanadka 2015, waxaan ku siineynaa tayo tayo sare leh oo tayo sare leh.Baadhitaanka Alice WoleSale SCESS SCES ee shirkadda ee qiimaha wanaagsan - Alice, nidaamka macaamil ganacsi ee caadiga ah wuxuu hubiyaa sharaf iyo amniga
Macaamiisha ka soo jeeda Lubnaan ayaa caado u ah in kabadan 10,000 oo ah astaan ​​baabuur oo yaryar oo loo yaqaan 'Alice'
Macaamiisha ka soo jeeda Lubnaan ayaa nagu habeeyay in ka badan 10,000 oo astaanta baabuurta yaryar ah, baakadaha ayaa la soo gabagabeeyey. Waad ku mahadsantahay taageeradaada iyo kalsoonidaada. Waxaan rajeyneynaa inaan mar kale iskaashi la yeelan karno mustaqbalka, waxaanan sii wadi doonnaa inaan siino macaamiisha alaabada tayo sare leh.
Intee in le'eg qiiq buu qiiq u dhawaqdaa? -
Mabda'a alaarmiga qiiqa ayaa ah in markii qiiqa uu galo qalabka wax soo qaaday oo uu sababayo dheelitirka hadda jira (nooca nooca) ama nooca xijaabka ah ee aan caadi ahayn (astaan ​​digniin ah) ayaa dhici doonta. Haddii qalabka wax baara uu daboolayo qiiqa ma geli karo, lama ogaan doono. Qiiqa iyo boodhka, digniin ma dhici doonto.
Waxa sababa qaylo-dhaanta qiiqa inuu sii wado shaqada - Alice
Kala soocidda qaylo-dhaanta qiiqa - Alice
Kala-saaridda Waxsoosaarka: Digniinta qiiqa ayaa loo qaybiyaa qaylo-dhaanta qiiqa, alaarmiga qiiqa qiiqa, iwm. Laga soo bilaabo dareemayaasha la isticmaalay.Alaarmiga qiiqa, Alaarmiga qiiqa ion wuxuu leeyahay alaarmiga qiiqa ion wuxuu leeyahay qol ionition. Qaybta shucaaca ee loo adeegsaday qolka ION, Americam 241 (AM241), waxay leedahay awood u leh qiyaastii 0.8 micrococie. Xaaladaha caadiga ah, waxay ku jirtaa xaalad isku dheeli dheelitiran oo ka mid ah korantada. Markii qiiqa iyo boodhku ku soo galaan qolka ionition-ka Xiriirka dheelitirka ah waa la baabi'iyaa, oo wareegga qaylo-dhaanta ayaa ogaanaya in diirada ay ka sarreyso marinka loo dejiyo oo uu dilo qaylo-dhaan.
Sida digniinta qiiqa u shaqeeyo - Alice
Mabda 'gudaha, qalabka digniinta qiiqa wuxuu ogaadaa ka hortagga dabka isagoo la soconaya uruurinta qiiqa. Waxay leedahay isha shucaaca ee Americation 241 qolalka gudaha iyo dibadda ee ionization, iyo iongida togan iyo kuwa taban ee ay soo saareen ionition u dhaqaaqista elektaroonigga ah iyo kuwa taban ee elektaroonigga ah siday u kala horreeyaan goobta korantada. Xaaladaha caadiga ah, hadda iyo korantada ee qolalka gudaha iyo dibada ee ionizard waa xasilloon yihiin. Mar haddii qiiqu ka baxo meel ka baxsan qolka ionition. Faragalinta dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee walxaha la soo eedeeyay, haddana korantada iyo korantada ayaa is beddeli doonta, baabi'inta isku-dheelitirka qolalka gudaha iyo dibaddaba ay u dirto alaarmiga alaarting-fog-bilaa-galka si ay u ogeysiiyaan helitaanka jidadka oo u gudbiya macluumaadka alaarmiga.
Digniinta qiiqa ma yeeshaan dhibco casaan ah - Alice
Qalabka digniinta qiiqa ayaa ah qalab aasaasi ah oo amniga loogu talagalay qoysaska. Waxaa jira warbixinno badan oo warar ah oo ah in aysan jirin qaylo-dhaan qiiq ah oo guriga dhexdiisa ah, iyo qiiqa iyo dabka guriga laguma ogaan karo wakhtiga dabka, taasoo keentay in guriga la gubo. Kadib markii alaarmiga qiiqa la rakibo, waxaa lagu meeleeyaa halkaas. Badanaa dhaqdhaqaaq ma jiro. Mar haddii ay jirto xaalad aan caadi ahayn, qiiq ama dab ayaa la ogaan doonaa.
Aaway wareejinta qiiqa qiiqa - Alice
Alaarmiga qiiqa looma dami karo si caadi ah. Sida aaladda ilaalinta badbaadada, gacanta laguma dami karo gacanta. Kaliya markii uu jabay geeska alaarmiga, ama si toos ah u goynta korantada
Faahfaahinta isticmaalka qalabka digniinta qiiqa - Alice
1. Qeybta Sharci-dejinta Qaranka waxay dejin kartaa qawaaniin u dhigma si ay ugu qasbaan rakibidda qalabka sheegayaasha sheega ee meelaha la deggan yahay; Intaas waxaa sii dheer, dawladdu waxay ka qeybqaadataa hagaajinta qiimaha qiiqa sheega qiiqa qiiqa wuxuuna bixiyaa siyaasadaha kabidda ee ku habboon si qoysaska caadiga ah ay u iibsadaan iyaga.
Waa maxay alaarmiga qiiqa? -
Digniinta qiiqa, oo sidoo kale loo yaqaan dabka digniinta dabka, dareemayaasha qiiqa, dareeraha qiiqa, iwm. Guud ahaan, batteriga, jirka, alaarmiga ag-at-ap-ka ayaa loo sameeyay inuu soo saaro dhawaaqa iyo Tilmaamo fudud, oo loo yaqaan qaylo-dhaanta qiiqa madax-bannaan.
Macaamiisha ka soo jeeda Nepal ayaa caado u ah in kabadan 40,000 oo magacyo bir ah oo bir ah oo alice ah
Waa maxay taxaddarrada loo adeegsado jebinta darbiga
1. Inta badan jajabinta darbiga waxay leeyihiin howlahooda kuleylka, sidaa darteed waxay leeyihiin shuruudo aad u sareeya oo ku saabsan tayada koobkii kareyda. Waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho koobka kacsan oo ka kooban galaas sare oo sarreeya. Xaaladda heerkulka sare, ha ku shubin biyo qabow iyo saliida saliida weelka weelka weelka, haddii kale dhalay weelka blosts ayaa sababi doona ballaarinta.